एमाले १५, कांग्रेस ११ र माओवादी केन्द्र ६ स्थानमा विजयी (को कहाँबाट बिजयी सुचिसहित) – YesKathmandu.com
काठमाडौं । दोस्रो चरणको मत परिणाममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच कडा कटक्कर देखिएको छ । पहिलो चरणमा पछि परेको नेपाली कांग्रेसले दोस्रो चरणमा एमालेलाई निकै चुनौति दिएको छ । हालसम्म सार्वजनिक पछिल्लो परिणाम अनुसार एमाले १५ स्थानमा जित हात पारेको छ । भने, नेपाली कांग्रेस ११ स्थानमा विजयी भएको छ । माओवादी केन्द्रले ६ स्थानमा जित निकालेको छ ।
पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका क्षेत्र ३, ४ र ६ मा नेपाली कांग्रेसको अवस्था राम्रो थियो तर परिणाम दोस्रो भयो । दोस्रो चरणको निर्वाचन भएका क्षेत्रमा एमालेको पकड राम्रो मानिन्थ्यो तर कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । ‘पहिलोभन्दा दोस्रोमा हामीले निकै ठुलो मेहेनत गरयौ’ कांग्रेस नेता गगन थापाले भने ‘पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मैले यात्रा पनि गरे ।’
कांग्रेसले एमालेका पकड क्षेत्रमा जित निकालेको छ भने एमालेले पनि कांग्रेसका पकड क्षेत्रमा कब्जा जमाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै जिल्लाबाट एमाले उम्मेद्धारहरु बिजयी भएका छन् । अन्य प्रभावशाली नेताका जिल्लामा पनि एमाले अघि देखिएको छ । २०४७ सालदेखि कांग्रेसको पडकमा रहेको दाङमा एमाले उम्मेद्धारहरु अगाडी देखिएका छन् ।
पछिल्लो परिणाम अनुसार कांग्रेस ८१ स्थानमा अगाडी छ । कुनै ठाउँमा झिनो मतअन्तर भएपनि कांग्रेस ८१ स्थानमा अगाडी छ । एमाले ७९ स्थानमा अगाडी देखिएको छ । यहाँ पनि दुवै दलबीच निकै प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । माओवादी केन्द्र ३१ स्थानमा अगाडी छ भने राप्रपा ५ स्थानमा अगाडी रहेको छ ।
१५. शहीदभूमि छिन्ताङ गाउँपालिका, धनकुटा
संगीता पन्त अर्थात साहसको प्रतिमुर्ती
प्रचण्डलाई ओलीको टेलिफोन जवाफः तपाईंकै अगाडि सभाध्यक्षलाई जुत्ता फुकालेर हान्नु राजनीति हो ?
लोकमान नियुक्तिको सक्कल फाइल सात दिनभित्र पेश नगरे मुख्य सचिवलाई कारवाही